Nzira Yokudzorerazve Mail Yako muCanada paPost Office
Matambudziko Canada Government
Tevera Izvozvi 6 Nhanho Dzakananga dzekukurumidza Kutumira Mail Yako paPost Office
Kana uri kutama, iva nechokwadi chekugadzirira kuti tsamba yako idzoserwe kuitira kuti usapotsa chero chinhu chakakosha. Iyi mirayiridzo ndeyokutumira kero yako yepositi kuchinjwa pahofisi. Iwe unogonawo kushandisa Chishanduko cheKero Online Service kuitira kuti tsamba yako idzoke zvakare kuburikidza nekombiyuta.
Iwe Unofanirwa Kudzorerazve Mail Yako?
Kuti urambe uchigamuchira mail yako pane imwe kero, iwe uchada kushandisa Canada Post in-munhu kana service online kuti utumire tsamba yako.
Iwe unogona kushandisa maCanada Post kunyorera mazano kune zvose zviripo uye zvenguva pfupi. Paunenge uchigadzirira kusingagumi, iwe unogona kusarudza kana kutumira mail yako kwemwedzi mina kana gore rimwe chete. Paunenge uchifamba kwenguva pfupi, iwe unogona kusarudza kuenda mberi kwemwedzi mitatu nechisarudzo chekuenderera mberi pamwedzi kubva pamwedzi kubva ipapo.
Aya matanho anotevera anoshanda kune zvose zvekugara uye kwebhizimisi yekudzorera.
Tevera Idzi Matanho matanhatu ekudzorerazve Mail yako
Kwemavhiki maviri musati maenda, enda kune imwe nzvimbo yepositi muCanada uye muzadze Redirection yeFomu Mail Mail.
Bhadhara mari yakakodzera. Mutengo wekutumira mameseji uchasiyana, zvichienderana nokuti iyo kero yako itsva iri munzvimbo imwe chete, mukati meCanada kana mune imwe nyika. Ikokowo mahedheni akaenzana ekugara uye yebhizimisi inofamba.
Rudzikinuro rwefomu yepa Mail Mail ruchaendeswa kumutariri wepositi yekero yako yekare.
Kumbira kuchinja kero kadi.
Pedzisa kuchinja kwekadhi kadhi uye uvatumire kune mabhadharo enyu ose, kusanganisira bhangi renyu, makambani ekadhi rechikwereti uye mamwe makambani aunowanzoita bhizinesi.
Kana iwe uchiri kuda kuti tsamba yako idzoke shure kwekutanga, enda kuhofisi yepositi uye uvandudze ushumiri usati wapera nguva yekudzoka. Bhadhara mari yazvino.
Cherechedza kuti mail inogona kutungamirirwa kune imwe kero muCanada, muUnited States uye kune dzimwe dzakawanda dzese. Nezvikonzero zvekuchengeteka, iwe unoda kuratidza zvikamu zviviri zvekuzivisa, kunyanya photo ID.
Mutemo weChristian Canadian Smoking Age neChirongwa neNyika
Chinese Head Head Tax neChina Exclusion Act muCanada
Zvakaita Nova Scotia Zita Rake
Nhoroondo yeChirango Chikuru muCanada
Zvinhu Zvose Zvaunoda Kuziva NezveVasasa Vemazuva Ekugara eCanada
Yellowknife, Capital of the Northwest Territories
Dunhu reDausi Zviratidzo zveCanada
Canadian Ice Storm muna 1998
Child Car Safety muCanada
T4RSP Mutero Slips
Nhanganyaya yeGomo-Oriented Programming
Bhuku Tsanangudzo muKemistry uye Biology
CSU Monterey Bay GPA, SAT, uye ACT Data
3 kanema kana kuti iwe unogona kukanganisa grey card
African-American Inventors uye Patent Holders - S
Dzidza Shanduro yeRammstein's Top Hits
Ko Nostradamus Yakafanotaura Kupera Kwepasi muna 2012?
Ndinofanira Kuwana Dhigirii Rezvemari?
Emily Dickinson: Kuenderera mberi Enigma
Vafudzi Vanofanira Kudzidzisa Kana Vachirwara Here?
Zvose Nezhizha (Musha) Chikoro
A Zvinyorwa zveBallet, Coppélia - Chiito 1
Kugadzira Ngoro Inosungiridza Pasi
Mazuva aMama Masikati - Ndeapi Vanyori Vanotaura Nezveamai
Geography uye Nhoroondo ye Yemen
Central Washington University GPA, SAT uye ACT Data
Inobatsira Japanese Adjectives
Alpine Kutanga Mountaineering
Best Best Astronomy Apps for Smartphones, Matetet, uye Makombiyuta
Nzira Yekushandura Tire Sizes Like Pro
Kuti St. Jerome Akashandura Bhaibheri sei kuMasses
ACT Chikoro chekugamuchirwa kumakoroji emakore mana e South Dakota
11 Best Children's Books Picture About Gardens and Gardening
Avhareji Goro Chikoro cheZvesunivhesiti Dzepamusoro